बिपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र २३औं वर्षमा – Health Post Nepal
२०७५ भदौ २४ गते १९:४४
बिपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रले स्थापनाको २२ वर्ष पूरा गरेको छ । बिपी जयन्तीको अवसर पारेर महाराजगन्जस्थित केन्द्रपरिसरमा आइतबार आयोजित समारोहबीच केन्द्रले २२औँ वार्षिकोत्सव भव्य रुपमा सम्पन्न गर्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाको प्रमुख आतिथ्यमा केन्द्रले समाजवादी विचारक एवम् नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको १०४औँ जन्मजयन्ती तथा संस्थाको २२औँ स्थापना दिवस मनाएको हो ।
केन्द्रले भर्खरै मात्र एडभान्स्ड आई क्लिनिक नामक शाखा विस्तार गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा स्थापित उक्त शाखामार्फत केन्द्रले देशका विभिन्न दुर्गम ठाउँमा गई आँखा शिविरहरु समेत सञ्चालन गर्र्दै आएको छ कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ एवं नेत्रज्योतिसंघका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. रामप्रसाद पोखरेलले बिपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालबाट ट्रकोमा (खस्रेरोग) उन्मूलन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । केन्द्रले हालसम्म ६ लाख मोतियाविन्दुका बिरामीको सफल शल्यक्रिया गरेको डा. पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ लाख मोतियाविन्दुका बिरामीमध्ये २ लाख नेपाली तथा ४ लाख भारतीय नागरिक थिए । विदेशमा समेत नेपालमा आँखाको उपचार राम्रो हुन्छ भन्ने प्रभाव पार्न केन्द्र सफल भएको उनी बताउँछन् ।
केन्द्रले उत्पादन गरेको दक्ष जनशक्ति नेपालको १८ वटै आँखा अस्पतालमा कार्यरत छन् । नेपालमा मात्रै नभई विश्वका जुनसुकै क्षेत्रमा केन्द्रबाट उत्पादित जनशक्ति कार्यरत रहेको निर्देशक आनन्दकुमार शर्मा बताउँछन् । केन्द्रले हालसम्म करिब ६५ रिसर्च पेपर प्रकाशन गरेकोमा १२ रिसर्च पेपर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा समेत प्रकाशित छन् ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले केन्द्रले आँखाको उपचारमा खेलेको भूमिकाबाट अतुलनीय रहेको बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अन्य २० वटै विधालाई आँखा केन्द्रजस्तै बनाउन सकेको खण्डमा विश्वले हामीलाई खोज्दै आउनेछ,’ डा. अग्रवालले भने, ‘अहिले पनि ठूलो जमात भारतबाट उपचारका लागि नेपाल आउने गरेको छ । यस संस्थाले सार्क मुलुकलगायत विश्वमै नेपालको गरिमा बढाएको छ ।’
‘यहाँका चिकित्सकहरु आफ्नो कार्यक्षमताको प्रदर्शनबाट विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारसमेत जित्न सफल भएका छन्,’ निर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘त्यसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समेत गरिमा बढाएको छ ।’ केन्द्रले आँखा सेवाअन्तर्गत ओपिडी तथा इमर्जेन्सी दुवै प्रकारका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।